Dadaalada Anders Lindström | Somaliska
Anders Lindström waa gacanyare ka tirsan kamuunka Falköping, waa nin aad ugu dadaalada arimaha Soomaalida oo si firfircooni ah ugu dooda xaquuqdooda qaasatan in loo keeno caruurtooda. Anders waxa uu wareysiyo ku saabsan xaalada Soomaalida siiyay wargeysyo badan oo ka soo baxa Sweden, waxa uu qoray maqaalo asagoo sidoo kale sameeyay bog Facebook oo lagu magacaabo “Somaliska barns rätt till sina föräldrar” boggaan ayaa helay taageerayaal ka badan 600 qof.
Wareysi aan la yeeshay Anders Lindström ayuu iiga waramay dadaaladiisa iyo arimo kale.
1. Waxaad wax iiga sheegtaa adiga iyo xiriirka kaala dhexeeya Soomaalida?
Waxaan ahay 53 sano jir, waxaan ka shaqeynayay kamuunka Falköping ilaa sanadkii 1994 ka dib markii aan dhameeyay waxbarashada. 7 sano ee la soo dhaafay waxaan masuul ka ahaa soo dhaweynta dadka soo galootiga ah, waxaan sameynay hawl wacan oo qofkasta waxaan u fududeynay in aan xal u helno arimahooda. Sanadaas waxaan fursad u helay in aan la kulmo dad cajiib ah oo dhaqamo kala duwan leh waxaan ka bartay wax badan. Waqtiyadaan dambe dadka ugu badan ee Falköping yimaada waa Soomaalida intooda badan waa dad wanaagsan oo firfircoon iskuna dayaya in ay Sweden la qabsadaan.
2. Waa maxay dadaalada aad heyso, maxaad u go,aansatay in aad Soomaalida caawiso?
Hawsheena waxay tahay in aan qofkasta u helno xal u wanaagsan, ilaa bishii maarso ee 2010 wax familo ah lama mideyn, waligeen ma aanan arag wax la mid ah arintaasn. markii hore waxaan is dhahay waa iska dhamaaneysaa balse waxaa ii cadeetay in dhibaato dhab ah ay taagan tahay, markaan kala hadlay dadka Swedishka ah, siyaasiyiinta iyo saxaafada maba la socdaan xaalada. Ka dibna waxaan ku dhexdhacay arintaas anigoo warbaahintu suaalo badan i waydiisay oo aan idaacadaha, wargeysyada iyo telefishinada la haladay.
3. Sidee Soomaalidu uga qeyb qaateen dadaaladaada?
Sida aan markasta aaminsanahay, Soomaalidu waa kuwo qofkasta caawiyo iyo qaasatan ayaguna is caawiya taasoo aan ku xirneyn qabiil iyo rag iyo dumar. Waxa i dhibay bilowgii waxay ahayd sidaan fariinta ku faafin lahayn iyo sidaan u heli lahayn in Soomaalidu si wadajir ah u shaqeeyaan. Waxaan la hadlay Soomaali badan qofkastana jawaabta wuu yaqaan balse fahankii ayaa meesha ka maqan. Ugu dambeyntii jaaliyada Soomaalida ee Falköping ayaa dhaqdhaqaaq sameysay oo mideysay dadka. Sidoo kale ururo ka dhisan Göteborg iyo Stockholm ayaa nagu soo biiray oo mowduucyo ku qoray wargeysyada sida Svenska Dagbladet. Horumar waan sameynay balse waxaan aaminsanahay in Soomaalidu intaas ka badan sameyn karto haddii ay midoobaan oo qabiilna aysan eegin.
4. Sidee u aragtaa dadaalada Soomaalida?
Sideen suaasha hore ku iri, Soomaali 50,000 gaareysa ayaa Sweden ku nool balse arintaan caruurta la diiday 5000 kun ayaa laga yaabaa in ay saameysay. Si kastaba ha ahaatee waxaa muhiim ah in wadashaqeyn ay sameeyaan, Sweden waxay u baahantahay sidoo kale in Soomaalida ay la shaqeyso halka Soomaalidana laga rabo in ay Sweden la shaqeeyaan.
5. Maxay sameyn karaan Soomaalidu si ay uga gudbaan xaalada adag?
Wariye kale ayaa suaashaan i waydiiyay maalin hore, tan ugu horeysa waa in ay faafiyaan fariintooda, tan kale waa in ay is adkeeyaan. sidoo kale waa in ay wada kulmaan oo ka wadasheekaystaan xaalada jirta oo is taageeraan.
6. Rajadu waa sidee in xal loo helo shuruuda Soomaalida?
Markasta waxaan ahay qof dhinaca wanaagsan wax ka eega, una dagaalamaya waxa saxda ah, hadda waxaa u maleysaa in siyaasiyiin badan ay taageerayaan xal baniaadanimo balse waqti dheer ayay qaadaneysaa. waxa aadka ii walwaliya waxay tahay dooda cusub ee warbaahinta ka socota oo sawirka xun ka bixineysa soo galootiga, waxay faafiyaan xumaan . Soomaalidu waxyaabo badan ayay sameyn karaan si ay xal u helaan, waa in ay muujiyaan in ay ka midyihiin mustaqbal Sweden ayadoo loo marayo dimoqraadiyada, xoriyada iyo xaquuqda aadanaha.
7. Maxaa ka ogaatay xiriirka aad la sameysay siyaasiyiinta bal wax go,aan ah oo soo socda?
Ma rabo in aan sidaas iraahdo balse waan ka niyad xumahay sida siyaasiyiinta iyo warbaahintu ay u dhaqmeen, qaarkood runta ma sheegaan, qaarna wax ayay dhahaan wax ka soo horjeeda ayay sameeyaan, qaarkood cabsi ayaa ku jirta. sidaas darteed waxaa muhiim ah in waxkasta la cadeeyo oo isku xir la sameeyo.
8. Sidee u aragtaa xaalada Guud ee Soomaalida Sweden ku dhaqan marka laga hadlaya la qabsiga dalka?
Runti waan la dhacsanahay horumarka ay sameynayaan Soomaalida Sweden qaasatan marka la eego in wadankooda uu 20 sano dagaal ku jiray, runtii hore uma arag geesino, farxad iyo horumar sidaas u dhaqsi badan. In badan luuqada si dhaqsi ah ayay ku bartaan, diyaarna way u yihiin in ay shaqeystaan, inta badan dhibaatada ayaga ma ahan haddii caqabad ku timaado in ay guuleystaan.
9. Sideen kor ugu qaadi karnaa muuqaalkeena bulshada?
Ku firfircoonaada xaalad kasta, wada shaqeeya oo soo bandhiga aragtiina ku wajahal dhibaatooyinka, oo wax ku siyaadiya bulsho weynta Sweden. dad badan ayaa jira Sweden oo diyaar u ah in ay idin taageeraan balse inta badan ma yaqaanaan sidii ay taageero u sameyn lahaayeen. Waa ogtahay in Swedishku ay marka hore ka cabsi qabaan dadka ajanabiga ah. Sidoo kale waxaan aaminsahay in aad Soomaali ahaan is aamintaan. dad badan ayaa ogahay oo Soomaali ah oo dadaal badan oo isku xir fiican sameeya, luuqada iyo dhaqanka ayay barteen. taageera dadka nuucaas ah, oo aamina, markasta dadka u soo bandhiga dhinaciina wanaagsan.
10. Fariin qaas ah ma u haysaa bulshada Soomaaliyeed ee Sweden?
Waxaan leeyahay Sweden waa in ay la shaqeysaa Soomaalida, iyaguna waa in ay la shaqeeyaan Sweden.
Safarkaygii Islaamka: Diana waxaa diinta ku soo jiiday dabeecada wanaagsan ee Muslimiinta
war meeshan waxkasoo socdaamajiraaneesoo maaliyeey aamina dhul kiina gaal xun oo uraya ka fiirvsashadiisafaaiido maleh meeshaan waxkasoosocda majiraaneewaxbayaan laydin wareerin
waxa ciso iyo sharaf mudan alle suxana watacala inta kadib waxan mahad gar ah u dira asxabta somaliska aad ayaan ugu farxsanahay dadalka aad ku jirtan ilaah ha idin abaal gudo………. anders asagana koleey waa nin halyaay ah qofka caqilka ahna waxa kasto oo jiro wuu daremi kara ninkan iswdhishka ah iskama tagerayo meel cidlo ah lkn waxu huba in somalida inta badan eey yihiin daad wacan daadalka u ku jiro waxan ka rajeyna waxa aan ku qanci dono inshaa allh
insha,allah kheyr ayey ku dhamaandoontaa
waan ka helaa wabsetkaan waliba sixad dhaf ah waxaan kala socdaa arimo aan xiseyo taa soo isortakashay inaa kala soc do wabsetkaan waxaan joga abis ababa ok waxaa ka warqabaa waxyabo esan okeen dadaka joga adis ababa